Samarekha.com.np :: स्वास्थ्य सेवालाई महिलामैत्री बनाउन सचेत छौं |
स्वास्थ्य सेवालाई महिलामैत्री बनाउन सचेत छौं
|| 502 Views || Published Date : 1st June 2020 |
विश्वमा कोभिड– १९ को संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन । संक्रमणबाट जोगिन विश्व नै एक किसिमले लकडाउनमा गएको छ । एकातिर लकडाउन र अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थाहरु कोरोनाबिरुद्धको तयारीमा जुटिरहँदा महिला, अपांगता भएका तथा अरु नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्नेहरुलाई अप्ठ्यारो भैरहेको छ । नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन् । यस्तो परिवेशमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले के गरिरहेको छ ? यस सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख सुनिता पौडेलसँग हामीले कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ उहासँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
१. दाङमा कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) बिरुद्धका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ?
स्वास्थ्य कार्यालयवाट सचेतना तथा कोरोना सजगता बढाउने कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न नाकाहरुमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दे हेल्थ डेक्स स्थापना गर्ने काम गरिएको छ । ज्वरो नापेर शंकास्पद ठाँउवाट आएका भारतीय नागरिकलाई आफ्नो देश फर्काउने काम गरिएको छ ।
भारतसँग नाका जोडिएकोले पनि हाम्रो देश उच्च जोखिम छ । दाङ जिल्लामा भारतसँग जोडिएका धेरै नाका छन् । हामीले भारतीय प्रतिनिधिसँग समन्वय गर्दै शंकास्पद बिरामीलाइ फर्काइएको थियो । त्यसैगरी हामीले १० वटै पालिकाहरुसँग समन्वय गर्दे भारत तथा तेस्रो मुलुकवाट आएका ब्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको र हालसम्म दाङमा २ सय ८८ वेडको क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना विरामीका लागि आइसोलेसन अस्पताल (कोरोना विशेष अस्पतालको ब्यवस्थापन) तथा नीजि तथा सरकारी अस्पताल गरी एक सय ६६ वटा आइसोलेशन वेडको ब्यवस्थापन गरिएको छ । प्रत्येक दिन दशवटै पालिकाहरुसँग समन्वय तथा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छौ । कोरोना विशेष अस्पतालमा तीन वटा भेन्टिलेटर सहितको सेवा छ । दाङ जिल्लामा स्वाव संकलनका लागि १७ जना ल्याव टेक्निसियनलाई तालिम दिइएको छ ।
विभिन्न क्वारेनटाइनमा वसेका ब्यतिmहरुको आरडिटी (Rapid diagnosis test) स्वास्थ्य कार्यालयको टोली परिचालन भएर परीक्षण गरिएको छ । दाङ जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पिसिआर मसिन संचालनमा आएको छ जसमा ९६ वटा परिक्षण स्याम्पल एकै पटक टेष्ट गर्न सकिने क्षमता छ । पछिल्लो समयमा मस्जिद, मुस्लिम समुदायमा गएर स्वाव परीक्षण समेत गरियो । दाङमा १४ वटा कोभिड फ्रेन्ड्ली एम्वुलेन्स वनाइएको छ । फार्मेसी तथा अन्य नीजि अस्पतालको अनुगमन गर्दै ज्वरो क्लिनिक तथा शंकाष्पद विरामीको विवरण लिने काम भएको छ । कोरोना उपचारको तयारी गरिरहँदा अन्य रोग तथा स्वास्थ्य समस्याप्रति अस्पतालहरुलाइ सजग हुँदै सेवा दिन अनुरोध गरेका छौ ।
२. कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पर्याप्त परीक्षण भैरहेको छैन भन्ने छ । किटको अभाव, पिपिईको अभावजस्ता कुराहरु पनि आइरहन्छन् । यसमा के भन्नुहन्छ ?
हो, चाहेजति परिक्षण हुन सकेको छैन । यद्यपि हामीले क्वारेन्टाइनमा वसेकाहरुलाई परीक्षण गरेका छौ । कोरोना फैलिँदै जाँदा विश्व नै घँुडा टेकेको अवस्थामा हामीहरुसँग सम्पूर्ण सुरक्षा उपकरण पुगेको छ भन्न त सकिँदैन । कमी हुनु स्वभाविक छ तर पनि सही तरीकाले पिपिईको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ । आवश्यक पर्ने ब्यक्तिले भन्दा पनि आवश्यक नपर्ने ब्यतिmहरुले उपकरणको प्रयोग गर्दा अभाव हुन गएको हो । स्वास्थ्यकर्मीकालागि पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता होस् भन्नेमा समन्वय गर्ने काम भैरहेको छ । परीक्षण कीटको अभाव संबोधन गर्न संघीय सरकारको तदारुकताको आवश्यकता छ ।
३. दाङमा यो महामारीबिरुद्ध अरु के कस्ता तयारी छन् ?
अहिले त हामी तयारीको अवस्थामै छौ । अहिलेसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस फेला नपरेको हुनाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन तर पनि छिमेकी जिल्लाहरुमा यसको संक्रमण फेला परेकाले हामी तयारी अवस्थामा रहेका छौ । जस्तै क्वारेन्टाइमा रहेका साथै तेस्रो मुलुकवाट आउनु भएका ब्यतिmहरुको स्वाव संकलन गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउने साथै क्वारेन्टाइनमा नरहनु भएका तर जोखिममा रहनु भएका जस्तो, मस्जिद, र्इंटाभट्टा, फ्रन्ट लाइनमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी कोरोना अस्पतालमा काम गर्ने ब्यतिmहरुको स्वाव नमूना संकलन गर्ने र यदि पोजिटिभ आएमा त्यस्तो ब्यतिmहरुको सम्पर्कमा आउनु भएका ब्यतिmहरु खोजी परिक्षणको दायरा बढाउने पोजिटिभ केसलाई कोरोना विषेश अस्पतालमा लगि उपचार गराउने योजना छ ।
विरामीको चाप एवम् धान्नै नसक्ने अवस्था आएमा कोरोना पोजिटिभ तर कुनै लक्षण नभएको ब्यतिmहरुमा चाहीँ क्वारेन्टाइनमा विशेष ब्यवस्थापन गरी उपचार गराउने र समस्या देखिएमा अस्पताल लगि उपचार गराउने र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ छुटै क्वारेन्टाइनमा राखी परिक्षण गराउने गरी ब्यवस्थापन मिलाउने तयारी छ । आवश्यक जनशतिm यतिवेला भएको र स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघवाट सहयोग लिने तयारी छ । त्यस्तै पोजिटिभ केस देखिएमा त्यो ठाउँलाइ विशेष सिल गरिदिने, घुम्ती टोली जसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याव अन्य स्टाफ नर्स परिचालन गछौ । कन्ट्याक टे«सिङ वढाउने योजनामा छौ ।
४. दाङमा सबैजसो स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था भयो । यी संयन्त्रहरु महिला मैत्री छन् कि छैनन् ? यसमा तपाईंको प्रयास के कस्तो रह्यो ?
हाम्रो दाङ जिल्लामा १० वटै पालिकामा क्वारेन्टाइन छन् । कुनै कुनै पालिकाहरुले रामो ब्यवस्थापन गर्नुभएको छ भने कुनै पालिकाले अझै राम्रो गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो महामारीमा सवै भने जस्तो त नहुन सक्छ तर पनि महिला तथा पुरुषको ब्यवस्थापनमा छुट्टै शौचालय, छुट्टै कोठा तथा महिलाहरुलाई आवश्यक पर्ने प्याडसमेत ब्यवस्थापन भएको पाउँदा चाहिँ राम्रो महसुस हुँदो रहेछ । विशेष म महिला भएकै कारण क्वारेन्टाइनमा महिलामात्र भए महिला सुरक्षाकर्मी खटाइदिनुहुन समेत सुरक्षा निकायसँग अनुरोध गर्ने गरेकी छु ।
५. क्वारेन्टाइन त बनाइयो तर त्यहाँ बस्न कोही तयार भएनन् भन्ने पनि छ । तपाईंको अब्जरभेसन कस्तो छ ?
क्वारेन्टाइन त्यति ब्यवस्थित नहँुदा वस्न नमानेको हुन सक्छ तर पनि कतिपय क्वारेन्टाइनमा वस्न खान ब्यवस्थित नभएको हँुदा छोडेर जान नपरोस् जस्तो मनसाय पनि पाइयो । तर मानव हो एकान्त वास वसी राख्न पनि गाह्रो नै हुन्छ । त्यसैले पनि सजग रही अनुशासित भई क्वारेन्टाइनमा वस्दा स्वयम् आफैलाई राम्रो एवम् आफ्नो परिवारलाई राम्रो हुने हँुदा बस्नु हुन अनुरोध छ ।
६. सर्वत्र कोरोनाभाइरसबाट जोगिने चर्चा भैरहँदा नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको कुरा पनि आइरहेको छ । गर्भवती, सुत्केरी, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधनप्रयोगकर्तालाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनिन्छ नि ?
यो अवस्था नै अप्ठेरो अवस्था हो । कोरोनातिर सबै केन्द्रीत भएको चाहिँ हो तर पनि सजग हुँदै दिर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरीलाइ सेवा भने सुचारु रुपमै दिइरहेका छौ । जिल्लामा यस्तो खालको समस्या आएको छैन ।
७. कोरोना कहरका बेला सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री समेत पुगेको छैन । सामान्य कपडाको मास्कका भरमा नर्सिङ स्टाफहरु खट्नु पर्ने अवस्था अन्त गर्न स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका हुँदैन ?
अहिले स्थानीय सरकार वलियो सरकार हो । स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय सरकार अन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र उहाँहरुको सुरक्षाको जिम्मा लिने श्रोत साधन स्थानीय सरकारसँगै रहेको छ । यद्यपी हामीसँग केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त सुरक्षा सामाग्री हामीले पालीकालाई वितरण पनि गरेकै छौ । तर त्यतिले नपुग्ने अवस्था भने छ । हामीले माग पनि गरेका छौं । उपलब्ध भएको खण्डमा पालिकाहरुलाई दिएका पनि छांै । विषेश ध्यान हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा पनि हो । यो अवस्थामा कोभिडको लडाकु स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी हुन् र यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्रोत साधन यसमा पनि खर्चर्नु पर्ने देखिन्छ ।
८. कोरोना कहरका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसैलाई पनि विदा या काज नदिने सर्कुलर गर्यो । यसले विशेष आवश्यकता भएका (सुत्केरी, गर्भवतीलगायत) स्वास्थ्य सेवामा रहेका महिलाहरुलाई अप्ठेरो परेको भनिन्छ तर तपाईंले यो सर्कुलरलाई ठीक भन्नुभयो किन ?
शुरुमा संघीय सरकारवाट दिर्घरोगी गर्भवती सुत्केरीलाई विदा दिने भनेर सर्कुलर गरियो । यो अवस्थामा दिर्घरोगी भनेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिर्घरोगी भन्दै कोही पनि नदेखिने अवस्था आएको खण्डमा विकराल परिस्थितिसँग जुध्न गाह्रो हुने आंकलन गरेर नै पछिल्लो त्यस्तो सर्कुलर भएको हो तर गर्भवती सुत्केरीलाई भने अवस्था अनुरसार खटाइएको छैन र त्यस्तो अवस्थामा खटाउनु पनि हँुदैन । कति कुराहरु आफै वुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ र नलेखियता पनि व्यवहारिकता अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
९.अलिकति व्यक्तिगत अनुभूतिको प्रसंग जोडौं, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुँदा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ? महिला प्रमुख भएर काम गर्दा के कस्ता सहजता या असहजता अनुभव गर्नुभयो ?
ब्यतिmगत अनुभवका कुरा भन्नु भयो, महिला प्रमुख भएर काम गर्नु चाहिँ हाम्रो देशमा चुनौतीपूर्ण नै छ जस्तो लाग्छ तर पनि उच्च मनोवल दृढ अठोटका साथ चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला प्रमुख भन्नासाथ कताकता अप्ठेरो, सँधै भनेको कुराहरु नहुने हँुदा वेला वेला परीक्षा दिनु पर्ने जस्तो अवस्था चाहिँ आउदो रहेछ । तर म यस्तो अवस्थालाई चुनौती एवम् अवसरको रुपमा लिन चाहन्छु र पटक पटकको अनुभव वलियो हँुदै अगाडि वढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु । सहयोगी हातहरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ । जसले थप काम गर्ने उर्जा प्रदान भएको छ ।
१०. अन्तमा, भन्न मन लागेको केही विषय छ कि ?
विश्वव्यापी महामारीले आक्रान्त भएको वेला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्दै भौतिक दुरी कायम गर्नु हुन म आम दाङवासीलाई अपिल गर्न चाहान्छु । भिडभाड नगर्नु हुन, अत्यावश्यक काममा वाहेक वाहिर ननिस्कनु हुन, विदेशवाट पाल्नु भएका दाजुभाइ दिदीवहिनीहरुलाइ अनुशासित भई क्वारेन्टाइनमा वसिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । पटक पटक हात सावुन पानीले मिचिमिची धुनु हुन एवम् स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु । यो कोरोना कहरका बेला सबैले उच्च मनोवल वनाउनु हुन अनुरोध छ । अन्तमा सहयोगी हातहरुलाइ धन्यवाद ।
(समरेखा म्यागजिनको फागुन चैत, २०७६ अंकमा प्रकाशित)